Yiqiniso, uthando - iyona umuzwa onamandla kakhulu angavuselela noma ukubulala umuntu, futhi yisandla ngaphandle okuyinto isintu ngeke nhlobo. Kulesi sihloko uzoba bajwayelane izingcaphuno ezidumile ngothando.
Lapha sikunikeza edume kakhulu futhi ethandwa phakathi abasebenzisi izitatimende zabantu ezinkulu. Sithemba ukuthi nawe uzoyithanda:
"Ngisho" kakhulu "akwanele ukubonisa uthando." (Per Bomarshe)
"Uthando bavame ukugqoka izibuko enjalo, lapho zethusi kubonakale igolide, Ukuvutha umlilo - izintambo amapharele kanye yemali -. Ngomnotho" (Miguel Saavedra)
"Kugcwele ngesisa silky nothando. Yena zinobuhlungu, kukhathazeka is lukhuni. Ngo ibanga, uyaziqhenya, oqinile uhlukana efanayo kuyo yonke le minyaka eside". (Byron)
"Bonke abantu uthando kuyafana." (Maron Publius)
"Kuyinto uthando ongashintsha umuntu, kangangokuba waze awusoze wazi." (Publius Terence)
"Uma kukhona uthando singcono mutual abantu, ngokuvamile uphawu nezingane." (Menard)
"Owesifazane Cold nje sike sahlangana nalowo owayeyoba ukuvusa imizwa efudumele wakhe." (Zhan De Labryueyr)
"Uthando Okokuqala ayidingi kakhulu - nje kancane ilukuluku futhi bestolkovstva". (Bernard Shou)
"Uthando -. Kunjengomuntu ulwandle olungenamkhawulo ububanzi zayo akafuni ukwazi ugu lweNyakatho Uthando kufanele akhokhe zonke igazi umphefumulo, njengoba isilinganiso lapha alikho.". (Hafez Shamsaddin)
"Noma ubani oye amandla othando, bayaqonda ukuthi akunakuthengwa." (Logfello Genri)
"Uthando -.. Kufana beacon imphakamisele phepho akabe fade kule nkungu kepha ubumnyama Le nkanyezi, ngawo itilosi ichaza bomkhathi ocean endaweni". (Uilyam Shekspir)
Kusukela uthando ukuba sizonde
Wonke umuntu uyazi ukuthi noma ikuphi, ngisho imizwa efudumele ungavula ku inzondo. Yiqiniso, ushintsho ezinjalo ukuba zenzeke, kumelwe sizame kanzima kakhulu, kodwa noma kunjalo futhi lokhu kwenzeka ngezinye izikhathi. Funda lezi izitatimende, lapho kukhona nazo ucaphuna zothando:
"Yiqiniso, uthando - kungcono epharadesi, kodwa ngokuvamile umhawu waphenduka kwensimu yase-Edene esihogweni.". (Lope de Vega)
"Uthando lifana isitshalo ithenda ukuthi ngeke aphile isikhathi eside uma ekuniseleni nezinyembezi inzondo." (Dzheyms Kuper)
"Futhi Bile, nezinyosi zonke uthando kukhulu." (Thithu Maktsy)
"Ukuvutha inzondo nothando wayehlale ephelezelwa intukuthelo futhi amahlaya okuhle." (Yum Devid)
"Lapho abathandi ukuxabana, imizwa yabo yothando Ignite." (Berton Robert)
Lapho imizwa ukuphuma ...
Abantu abaningi ungakhohlwa uthando ababenalo ekuqaleni. Kodwa yini okufanele uyenze uma uhamba? Kuleso simo, esinazo esitolo ngawe lezi izingcaphuno uthando:
"Kusukela uthando eceleni ikhula isikhathi eside. Kodwa ukuthola wakhe, yena ngokushesha uyacima." (Menandr)
"Awukwazi kuthuke uthando indoda, kodwa ukunganaki, nokunganaki ngangokunokwenzeka." (Lope de Vega)
"Kukhona futhi kuyoba khona uthando, kungenza ngihlonipheke futhi ubungani ngaphandle ukuqinisela '. (Addison Dzhozef)
"Njengomlilo lothando elingaziwa ukuze uphumule she phoqoka njengoba nje umuntu uyayeka ukuba sesabe noma ithemba." (Francois Laroshfurko)
"Kubanjwa ubungani noma ubuhlobo uthando bekulokhu isenzo self-uthando futhi mkhuba silly ukuthi bangambulala umuzwa kithi ekuqaleni, sabe umuntu othandekayo." (Sand Zhorzh)
Thanda unxantathu. izingcaphuno
Uthando unxantathu uyohlale omunye abayokufa. Ubuhlobo obunjalo kuyinkimbinkimbi asilethanga izingcaphuno uthando:
"Kwezinye izimo, uthando unxantathu kuyafana esigcawini Malevich". (Umbhali ongaziwa)
"Yiqiniso, kukhona unxantathu lothando kanye engela obtuse. Futhi avame ukuba ngibe ngumfazi wendoda." (Shapiro Boris)
"Imithetho unxantathu geometry lothando bengeke balalele, ngoba wonke amakhona kukhona blunt." (Jankowski Stas)
"Kukhona unxantathu lapho bonke engele ibukhali. Lena uthando unxantathu." (Dzhangirov Jan)
"Kumila e uthando unxantathu - kuyinto esivelele injabulo kanye nogqozi." (Gennady Malkin)
"Nge Amazing unxantathu swiftness lothando ezingenza abe ipholigoni." (I-Spiegel Yefim)
"Uma ilungu uthando unxantathu, khona-ke kumelwe sikuqonde lokho kufana abahlala ngumphakathi". (Muraveva Olga)
"I Bermuda Triangle uthando nenjabulo yanyamalala unomphela imikhaya eminingi." (Tatarkin Yuri)
Sithemba ukuthi uwathokozele izingcaphuno uthando ukuthi wacosha.